#IdentityMatrix: Ireo fiteny Afrikana sy ny zo nomerika · Global Voices teny Malagasy
#IdentityMatrix: Ireo fiteny Afrikana sy ny zo nomerika
Mpikatroka fiteny miisa dimy avy amin'ny firenena Afrikana miisa efatra
Voadika ny 20 Aogositra 2020 4:50 GMT
Vehivavy avy amin'ny vondrona Ndebele any Afrika Atsimo. Betsaka ireo vondrona indizeny sy fiteny indizeny any Afrika Atsimo no tsy miseho an-tserasera. Sary avy amin'ny UN Photo/P Mugabane, 1 Janoary 1988. (CC BY-NC-ND 2.0)
Ny 20 Aprily ka hatramin'ny 22 May 2020, nanatontosa resadresaka tao amin'ny Twitter ho ampahan'ny tetikasa “The identity matrix: Sehatra handrindrana ny fandrahonana fanehoan-kevitra an-tserasera eto Afrika” ny Global Voices Afrika Atsimon'i Sahara izay niarahany tamin'ny Rising Voices.
Vakio bebe kokoa: Projet « matrice d'identité » : régulation des menaces pesant sur la liberté d’expression en Afrique
Ny Africa Digital Rights Fund avy amin'ny Fiaraha-miasa amin'ny politikan'ny TIC Iraisampirenena ho an'i Atsinanana sy Atsimon'i Afrika (CIPESA) no mamatsy vola ity tetikasa ity.
Nandritra ny dimy herinandro, mpikatroka teny miisa dimy avy amin'ny firenena Afrikana miisa efatra no nizara ny fomba fijeriny momba ny fifandraisan'ny fiteny Afrikana sy ny zo dizitaly ao amin'ny kaontinanta.
Nanangona ny hevitr'izy ireo momba ilay lohahevitra ireo mpikatroka tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny fiteny Afrikana miisa dimy toy ny Bambara, Igbo, Khoekhoe, N|uu, Swahili, Yorùbá, ho fanampin'ny teny Frantsay sy Anglisy.
Nizara ny traikefany manokana sy ny fomba fijeriny momba ny fanamby ara-pitenenana sy ny fandrahonana ny zo nomerika ihany koa izy ireo.
Vakio bebe kokoa: Projet « matrice d'identité » : discussions autour de l'identité et des droits numériques en Afrique
Resahana amin'ny adihevitra ny fomba fanilikilihana votoaty dizitaly amin'ny fiteny Afrikana noho ny fandrahonana mahazo ny tsy fiandanian'ny aterineto; ny fanitarana ny fampahalalana fandisoana sy ny vaovao diso amin'ny fiteny Afrikana amin'ny sehatra dizitaly maro ary ny ataon'ireo orinasa na ny fiarahamonim-pirenena momba izany; ny vokatra ny tsy fisian'ny fifandraisana amin'ny aterineto taka-bidy any amin'ny toerana misy vondrom-piarahamonina be mpampiasa ny fiteny Afrikana; ny maha zava-dehibe sy ny fanamby ho an'ny zo hahazo vaovao amin'ireo sehatra dizitaly amin'ny fiteny Afrikana. Nojeren-dry zareo ihany koa ny politikan'ny orinasa sy ny fanamby atrehina misy fiantraikany amin'ny fomba anehoan'ny olom-pirenena malalaka ny heviny amin'ny fitenin'izy ireo.
Fiteny Bambara (Burkina Faso)
Si ni kɛnɛya (‘Ela velona sy salama’), soratra amin'ny fiteny Bambara / Jula eny amin'ny taxi-brousse any Burkina Faso. Sary sy fandikan-teny nataon'i Coleman Donaldson/An ka taa, nahazoana alalana.
Betsaka ny lahateny ampahibemaso momba ny vaovao diso amin'ny fantsom-baovao, indrindra amin'ireo fiteny iraisam-pirenena toa ny Frantsay sy Anglisy, ary amin'ny fiteny Afrikana lehibe.
Fa iza anefa no miraharaha momba ny fandisoana na ny vaovao diso amin'ny fitenin'olom-bitsy toa ny Bambara?
Feno fahadisoam-baovao maro ny sehatra nomerika toa ny WhatsApp sy ny Facebook raha tsy misy ny fomba hanaraha-maso ny vaovao faikany amin'ny fiteny Bambara izay iray amin'ireo fiteny any Afrika Andrefana.
Nitatitra i Kpénahi Traoré mpikatroka fiteny:
Vakio bebe kokoa: Qui se charge de déjouer la désinformation en ligne en bambara ?
Khoekhoe and N|uu languages (Afrika Atsimo)
Manana fiteny ofisialy miisa iraika ambin'ny folo i Afrika Atsimo: sivy no fiteny Bantu ary roa – Afrikaans ary Anglisy – no fiteny vahiny.
Saingy tsy nankatoavina mihitsy ho tenindrazana ireo fiteny roa voalohany, Khoekhoe sy Ncuuki (na N|uu ) sady tsy nampianarina tany an-tsekoly Afrikana Tatsimo ka vao mainka niha-sarotra kokoa ny namadika ny fironana amin'ny fahaverezan'ny fiteny.
Nitarika ‘fikomiana amin'ny fiteny’ nomerika manohitra ny famafana sy ny fahalaniana tamingana ireo fiteny roa voalohany any Afrika Atsimo ireo ilay mpikatroka Denver Toroxa Breda.
Vakio bebe kokoa: ‘Révolte linguistique’ : cet activiste tweete contre la disparition des langues autochtones en Afrique du Sud
Swahili no fiteny Afrikana be mpampiasa indrindra, nekena tamin'ny fomba ofisialy ho iray amin'ireo fiteny ofisialin'ny Vondrona Afrikana (UA), miaraka amin'ny Anglisy, Portiogey, Frantsay, Espaniola ary Arabo. Fiteny iraisana ifampiresahana ho an'ny Vondrom-piarahamonin'ny Fanjakana Afrika Atsinanana (EAC) ihany koa ny Swahili.
Saingy, tsy hita firy amin'ny aterineto ny Swahili.
Miasa amin'ny fanovana izany ilay Kenyana Bonface Witaba mpikatroka fiteny.
Vakio bebe kokoa: Améliorer la visibilité du swahili : identité, langue et Internet
Fiteny Yorùbá (Nizeria)
Vehivavy mpisoronabe ao amin'ny toerana masina any Ọ̀ṣun any atsimo andrefan'i Nizeria. Sary avy amin'i Carsten ten Brink, 15 Novambra 2018 (CC BY-NC-ND 2.0).
Fiteny manana toe-peo miaka-midina ampiasain'ny olona miisa 30 tapitrisa eo ho eo any atsimo andrefan'i Nizeria ny Yorùbá sy any amin'ny firenena manodidina any Benin, Togo ary Sierra Leone. Misy olona miisa 100.000 eo ho eo ihany koa mampiasa ilay fiteny any amin'ny Fanjakana Britanika ary olona miisa 190.000 eo ho eo any Etazonia.
Na izany aza, tsy natao lohalaharana amin'ny aterineto ny fiteny Yorùbá ary matetika voahitsakitsaka na tsy raharahian'ny sehatra dizitaly.
Nanamafy i Adéṣínà Ghani Ayẹni, Nizeriana mpikatroka fiteny Yorùbá fa Èdè ẹni ni ìdánimọ̀ ẹni (mari-panondroana iray ny fiteny). Noho izany, zo ho an'ny fiteny rehetra ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy eo amin'ny fiteny amin'ny aterineto.
Vakio bebe kokoa: Mpikatroka ho an'ny fiteny yorùbá mitolona ho an'ny hamaroam-piteny ety anaty habaka nomerika
9 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy